एमालेले कारबाही गरेका सांसद आए संसद् चल्न नदिने: केपी ओली। - Malayakhabar
होम पेज फिचर एमालेले कारबाही गरेका सांसद आए संसद् चल्न नदिने: केपी ओली।
एमालेले कारबाही गरेका सांसद आए संसद् चल्न नदिने: केपी ओली।
काठमाडौं := नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी मंसिर २८ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् बैठक पनि चल्न नदिने अडान दोहो¥याउनुभएको छ।
शुक्रबार थापाथलीस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पदबहाली गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपालसहितका सांसदहरू बैठकमा आउने भएकाले आफूहरूले संसद् बैठक चल्न दिन नसक्ने तर्क गर्नुभयो।
उनीहरू गैरसांसद भएकाले उनीहरू आएको संसद् बैठकलाई एमालेले चल्न दिन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवस्थापिका २८ गते बोलाइएको छ । किन बोलाइएको हो ? अब त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएपछि थाहा होला । तर, हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू संसद्भित्र राखेर संसद् कसरी चल्न सक्छ ? नियमले गैरसांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन । हामीले पार्टीबाट साउन २५ गते नै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू फेरि २८ गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले आफ्नोे पार्टीको दसौँ महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । केही समयमै एमाले जिल्ला अधिवेशनतिर जाँदैछ । चितवनमा दसौं महाधिवेशनका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार बुझाउन लागिएको महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभयो ।
अघिल्लो लेख विधान परिमार्जन गर्न माओवादीले बनायोे पाँच सदस्यीय उपसमिति।
पछिल्लो लेख पुल अलपत्र पारेर ठेकेदार फरार भन्दै युवाहरूको खबरदारी।